Fouad Al-Farhan : Mila Mandroso Isika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 29 Avrily 2018 14:15 GMT
Raha efa nanaraka ny Global Voices nandritra ny enim-bolana mahery ianao, dia mety efa namaky imbetsaka ny anaran'i Fouad Al-Farhan tamin'ity sehatra ity talohan'izao. Ny tena marina, iray amin'ireo lahatsoratro tany amin'ny volana Oktobra 2005 no misy ny lahatsoratra avy amin'i Al-Farhan, rehefa nandao ny fivoriana izy niaraka tamin'i Karen Hughes, sekreteram-panjakana ho an'ny diplaomasiam-bahoaka sy ny raharaham-bahoaka ao amin'ny Departemanta Amerikana, nandritra ny fitsidihany an'i Arabia Saodita. Koa, iza moa i Fouad Al-Farhan ?
Iray amin'ireo blaogera Saodiana mpisava làlana i Fouad Al-Farhan. Teraka ny taona 1975 tao Taif, andrefan'i Arabia Saodita, ary nandranto fianarana ambony tany Etazonia. Nahazo maripahaizana momba ny haivarotra tao amin'ny Eastern Washington University, avy eo nanohy nianatra tao amin'ny Ball State University naka ny maripahaizana “maîtrise en informatique”. “Na niezaka nanàla ny fahatsiarovana tsara rehetra momba ny fiainako tany Amerika aza i Bush sy ireo jiolahiny, dia mbola mieritreritra aho fa tany no niainako ny taona tsara indrindra teo amin'ny fiainako, nivezivezy teo amin'ny firenenen-tsamihafa toa an'i Oklahoma, Texas, Washington, ary Indiana”, hoy izy tamiko nandritra ny resadresaka tamin'ny alàlan'ny imailaka.
Al-Farhan, izay liana amin'ny resaka politika amerikana sy Saodiana, ary nanaraka ny hetsiky ny mafana fo liberaly sy ny hetsiky ny Islamika eo amin'ny Tontolo Arabo, nilaza izy fa namaky bilaogy maro ary nahita ny fiantraikany tamin'ny fiainan'ny amerikana hatramin'ny nanombohan'ny revolisiona teo amin'ny sehatry ny bilaogy. Na izany aza, efatra volana taty aoriana izy vao nanapaka hevitra ny hanokatra ny bilaoginy manokana. “Nisaina tsara ny zavatra tiako homena aho, te-hiavaka aho ary hanolo-tena amin'io zava-baovao amin'ny fiainako io araka izay azoko atao,” hoy izy, sivy volana taorian'ny nanombohany nanoratra bilaogy.
Mety ho samy hafa tanteraka ireo blaogera, fa ny ankamaroan'izy ireo dia manana zavatra iray iraisana: te-haneho ny heviny izy ireo. Tsy hafa amin'izany i Al-Farhan. “Tiako ny maneho ny fahalalahako, ny hevitro ary ny fanantenako, ampahibemaso ary amin'ny fomba tsy dia mahazatra ao anatin'ny fiarahamonina Saodiana. Heveriko fa ny blaogy no fitaovana tsara indrindra hanaovana izany ankehitriny,” hoy izy. Ny antony hafa izay nandrisika azy hanomboka ny bilaoginy koa dia ny teritery amin'ny fahafahana maneho hevitra ao Arabia Saodita. “An'ny governemanta daholo ny fantsom-pahitalavitra rehetra “. Ny gazety moa dia tena voasivana, ary ny sasany amin'ireo tonian-dahatsorany ao no efa teo amin'ny toerana misy azy 30 taona lasa. Izany rehetra izany no mahatonga ny fampahalalam-baovaonay hankaleo sy ntaolo be,” hoy izy nanampy. Mihevitra i Al-Farhan fa ny fitorahana blaogy no hanampy ireo tanora Saodiana hampita ny feony any amin'ny governemanta, ary hampahafantatra an'izao tontolo izao koa fa mizara ny soatoavina maha-olona azy izy ireo, ny tanjony ary ny fironany.
Tsy mandany fotoana betsaka miasa eo amin'ny bilaoginy i Fouad Al-Farhan. Maka antsasak'adiny isanandro izy hampiakarana vaovao, saingy mety miova izany arakarak'ireo andraikitra hafa sahaniny. Kanefa mahatsapa fifamatorana amin'ny mpamaky azy ve izy? Tsy dia izany loatra. “Isaky ny mitoraka blaogy aho dia fantatro fa misy olona mandre ny feoko. Tsy miraharaha aho na miombon-kevitra na tsia amiko io “olona “io, na tia ahy na tsia. Ny tena zava-dehibe amiko dia ny hoe voavoakako ny hevitro. Zo ho an'ny olombelona rehetra ny fahalalahana haneho hevitra , “hoy izy.
Raha itodika any amin'ny tontolon'ny blaogy Saodiana indray, mieritreritra i Al-Farhan fa mbola tena vaovao ny fitorahana blaogy any Arabia Saodita. “Raha mampiasa ny aterineto ny 10% amin'ny Saodiana dia heveriko fa ny 1% -n'ireo ihany no mahalala ny blaogy na efa nandre izany,” hoy izy. Mety misy hanome tsiny ireo Saodiana mpitoraka bilaogy ny amin'izany, ary nilaza i Al-Farhan fa malahelo mahita ireo manampahaizana manokana amina taranja sasany izay mampiasa aterineto malalaka nefa dia tsy mety hizara ny fomba fijeriny sy ny fahalalany amin'ny alàlan'ny blaogy. Mampanontany tena ny hatsaran'ny votoatin'ny bilaogy Saodiana, nefa heveriny fa tsara kokoa noho ireo izay tsy manao ny an'ireo mitoraka bilaogy ireo. Inona no mora kokoa? Hanova ireo mpitoraka blaogy misafo morona fotsiny ho lasa matihanina, sa handresy lahatra ny matihanina hanomboka htoraka blaogy ? Tsy azony antoka, nefa “tokony hiasa amin'ireo lafiny roa ireo isika”, hoy izy nanampy. “Ny mahatonga ny misafo morona dia noho ny fahatahorantsika haneho ny tena ao anatintsika, ary izany no mahatonga antsika mahita ireo Saodiana mpitoraka blaogy manisy sivana amin'ny rakitra havoakany.” Mihevitra izy fa angamba matahotra izy ireo sao tsy ho azon'ny olona ny tiany ambara.
Fouad Al-Farhan kosa tsy mba manana izany tahotra izany. Izy no iray amin'ireo Saodiana bilaogera vitsivitsy izay mampiasa ny tena anarany. Manafina ny momba azy ny bloagera satria matahotra ny governemanta, ny fiarahamonina, na ny fianakaviany. Saingy heveriny fa tsy tokony hatahotra ny governemanta ny bilaogera. “Ny ady ataon'ny governemanta dia ny manohitra ireo mpampihorohoro maniry hamotika ny firenentsika,” hoy izy, “ary raha mpampihorohoro ianao dia tsy tokony hieritreritra ny hanomboka hanao bilaogy, fa tokony hieritreritra ny fomba handosirana.” Firenena mbola tanora isika, ary fotoana hialan'ny Saodiana amin'ny tahotra sy ny fahanginana izao. “Tena mieritreritra aho fa ny fitorahana blaogy no afaka hanova tanteraka ny fiarahamonina Saodiana,” hoy izy nanampy.
Mbola tena ampiasain'ireo Saodiana mpampiasa aterineto foana ny famakiana ny vaovao farany amin'ireny Karajia ireny ary mandray anjara amin'ny resadresaka ao. Ny lazan'ny vohikala Al Sahat izay vondrona karajia maromaro izay matetika no voampanga ho masiaka fijery eo amin'ny sehatry ny filazambaovao, no ohatra iray mazava amin'izany. Miavaka ny lazan'ny Al Sahat hoy i Fouad, ary mino izy fa manaraka io vohikala io avokoa ny olona ao Arabia Saodita, isan'izany ny Ministra sy ireo tompon'andraiki-panjakana. Vao tsy ela akory izy izao no niditra tao amin'ilay vohikala Al Sahat, ka tsy miombon-kevitra amin'ny filazàna fa masiaka fijery izy io. Na izany aza, nilaza i Fouad fa manana ny ho aviny ny blaogy; an-dàlana miditra ao amin'ny tantàra ny karajia. Ao amin'ny karajia, misy fetra apetraky ny tompony, ary ireny fetra ireny no manamarika ny maha-izy azy sy ny lazan'ilay karajia. “Ao amin'ny blaogy, ianao no tompony, ary miankina aminao ny mampiavaka sy mampalaza ny blaoginao.”
Inona no mety fiantraikan'ny blaogy amin'ny filazambaovao nentim-paharazana ao Arabia Saodita? “Tsy afaka ny hifaninana amin'ny filazambaovao kosa aloha ny blaogy raha eo amin'ny fampitana vaovao, fa mety ho lohany eo amin'ny famakafakana vaovao iray”, hoy i Al-Farhan nanoratra. Mahita izy fa tsy dia hinoan'ny olona loatra ny gazety Saodiana mpiseho isanandro.”Raha lasa blaogera malaza ianao, dia hinoan-teny lavitra noho ny gazety rehetra. “Hoy izy nanampy.
Na mino ny ho avin'ny blaogy aza i Al-Farhan, mbola tsy fantany hoe ho toy ny ahoana izany ho avy izany. Fa afaka ny hanana fijery tsara fotsiny aloha izy. “Raha miasa mafy isika amin'ny fanapariahana ny blaogy ao Arabia Saodita, ka mandresy lahatra ireo olona mpitarika hanao izany, dia hahazo tombony amin'ny blaogy toy ny any amin'ny firenena Tandrefana isika, “hoy izy “Mila mandroso isika.”